शब्दकोश: समाचारको सेरोफेरोमा बोल्ड म्यान कोइराला
“भोक लागेपछि त पेट्रोल पनि कस्तो फेन्टा जस्तै देखिएको !”
मेरो मुखबाट बजिहाल्यो । बेलुका ९ बजे अफिसबाट घरमा ड्रप गरिदिन हिँडेका थिए अफिसका ड्राइभर दाइ । चुहिन थालेको पेट्रोल भरिएको बोतल गाडीमा रहुन्जेल समाइदिन उनले अह्राएपछि मेरो भोक साटिँदै पेट्रोल फेन्टामा प्रतिविम्बित भएको थियो । बिहान होटलमा भात खाएपछि दिनभरि केही नखाँदाको नतिजा थियो त्यो । त्यसो त त्यस्तो भोक पुराण मामूली कुरा थियो । काममा डटेपछि भोक र तिर्खालाई तिलाञ्जलि कति दिनुपर्छ-पर्छ । बेपरवाहका साथ ।
यो थियो रातिको कुरा । यसो हुनुमा दिउँसोको खटाइको रनाहा कारक थियो ।
मार्च १९ शुक्रबारको त्यो दिन स्टान्डबाइ थियो न्युजरूम । काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तोसुकै अवस्थाको खबर सम्प्रेषणका लागि सबैजना तम्तयार थियौँ कान्तिपुर टेलिभिजनका हामी सदस्यहरू । कस्तो निष्‍ठुर पल र जिम्मेरवारीको तह, सिकारीले सिकार पर्खिए झैँ खासमा त हामी अस्वस्थ रहेका मृत्यु कुरिरहेका थियौँ । सुनिएअनुसार स्वास्थ्य संवेदनशीलता र हल्लाको मात्रा नै त्यस्तै थियो । साँझपख प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू कोइरालालाई भेट्न कोइराला उपचाररत छोरी सुजाता कोइरालाको मण्डिखाटारस्थित निवासमा पुगे । त्यसपछि त झन् स्थिति चरम संवेदनशील भएछ भनेर लख काट्न थालियो । नत्र राष्‍ट्र बैंकको गभर्नर र संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसक्नासाथै साँझको समयमा हुल बाँधेर मन्त्रिहरू त्यता जानुको अत्यावश्यकता के थियो भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।
सम्साँझै ‘लाइभ’ रिपोर्टिङका लागि क्यामेरासहितको प्राविधिक र संवाददाताको टोली मण्डिखाटारतिर लाग्यो । रातिसम्म बेला-बेला कहिले टेलिफोन टक र कहिले लाइभ भिजुअलसहितको रिपोर्टिङ गर्दै रहे रिपोर्टरहरूले । गिरिजाप्रसादलाई राखिएको कोठामा बलेको बत्तीमा क्यामेरा फोकस गर्दै चित्त बुझाउँदै गरेका देखिन्छन् क्मामेरा पर्सन । भित्र जाने अनुमति र व्यवस्था छैन । खासमा कोइरालाको अवस्था के छ, चिकित्सकरूले गर्ने ब्रिफिङ्कै आधारमा बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू फेरो हत्तपत्त निस्किने होइनन् । म भने स्क्रोल बार अपडेट गर्दै, बेलाबेला ‘फ्लास न्युज’ हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै अफिसमै तैनाथ छु । त्यो दिन त्यस्तै हल्का गाइँगुइँमै बित्यो । स्वास्थ्य खराब छ , सुधारोन्मुख नभए पनि स्वास्थ्यस्थिति स्थिर नै छ, कोइराला चिकित्सककै निगरानीमा छन्, नियमित दिइँदै आएको अक्सिजनको मात्र बढाइएको छ भन्ने जानकारी आयो । राति अबेरसम्म सम्भावित आकस्मिक खबर सम्प्रेषणका लागि मण्डिखाटारकै कोइराला निवास बाहिर संवाददाताहरू अड्डा जमाउने भए ।
भोलिपल्ट अन्य दिन पुग्ने समयभन्दा अलि बिहानै जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगियो अफिस । शनिबारको दिन, धपेडी, कुदाकुद, कार्यक्रमहरू भइरहने, नेताहरूले बोलिरहने अन्य व्यस्त दिनभन्दा खबरहरूको चाप स्वत: कम हुने दिन हो । तर, विशेष सक्रियताबाट मुलुकमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराई शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका दिँदैआएका राष्‍ट्रिय राजनीतिका मूल खम्बा नै बिरामी भएको बेला अन्य दिनको झैँ तनाव थियो न्युज रुममा । जे पनि हुन सक्थ्यो, तम्तमार भएर बस्नु नै बुद्धिमानी थियो । कोइरालालाई राति पखाला लागेको र थप कमजोर भएको खबरहरू आउन थाले । राति कोइरालाको स्वास्थ्य नाजुक भएर छातीमा पम्प दिनुपरेकोसम्म हल्ला फैलियो । श्‍वासप्रश्‍वासको गति मन्द हुँदै गएकोले अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम भएको चिकित्सकहरूले बताउन थाले । सबै टेलिभिजन र रेडियोहरू कोइरालाकै स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा घुमिरहेका थिए । सोझै कोइरालाको हाल चित्रण गर्ने पहुँच कसैको नभए पनि मिडियाहरूले कुनै न कुनै रूपमा ताजा विवरण छरिरहेका थिए ।
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, सरकारका मन्त्रीहरू, काङ्ग्रेस नेतागण आलोपालो आउँदै जाँदै गरिरहेका देखिन्थे । कोइरालालाई हेरेर/भेटेर फर्किएका तिनै नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिएर आम दर्शक स्रोतालाई आश्वास्त पार्नुभन्दा विकल्प थिएन । कार्यकर्ता एवम् शुभेच्छुकहरूको भीड पनि मण्डिखाटार निवास बाहिर बढ्दो थियो । “मैले दुई चोटि बोलाएँ, केही बोल्नुभएन”, प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिए, “उहाँ जसरी पनि ठीक हुनुहुन्छ, देशलाई अझै उहाँको खाँचो छ । साथमा बाबुरामले पनि थपे । भेटेर फर्किएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री गणेश तिवारी नेपालीले ‘आश भएको विश्वास नभएको’ रूपमा कोइरालाको स्वास्थ्यस्थितिलाई उल्लेख गरे । झन् के हो के हो भन्ने उदेक भो । बिहान ११ बजेतिर पछि खबर आयो, बिहान ५ बजेदेखि कोइराला अचेत छन् । पखालाको कारण कमजोरी बढ्यो । राति ११ बजेदेखि नै कोइराला अचेत अवस्थामा रहेको एभिन्युज टेलिभिजनले समाचार बुलेटिन र ब्रेकिङ न्युजमा प्रस्तुत गरिरहेको थियो । स्रोत थिएन विश्वास दिलाउने, चिकित्सकको प्रतिक्रिया कुर्नु नै आधिकारिकता र पत्रकारिताको आचारसंहितालेको कोरेको रेखा सम्झेर प्रतिक्षा गरियो ।
एभिन्युजले नै कोइरालाको निधन १२ बजेर ११ मिनेटमा भयो भनेर फुक्यो । पहिलो बन्ने होड कसरी फस्टाइरहेछ इन्डियन टेलिभिजन च्यानल जस्तै नेपाली च्यानलमा पनि । कोइराला खबर अपडेटमा सामेल हामी कान्तिपुरकर्मीहरूले हामीले अचम्म मान्यौँ । जे कुरालाई पनि बिनासोच र आफूले ब्रेक गरेको हो या होइन भन्ने समझ नराखी ‘ब्रेकिङ न्युज’ का रुपमा पिलिकपिलिक स्क्रिनमा छर्ने इन्डियन छ्यानल हेर्ने हो भने बेहोस भइन्छ । कति हो कति ब्रेकिङ न्युज ! केही छिनमा उसैले कोइराला पुत्री सुजाताले जानकारी दिएको भनेर खबर पुष्टि गर्ने प्रयास गर्यो । स्रोतको अभावका साथै चिकित्सकले क्लिनिकल्ली र अफिसियल्ली डेथ भएको घोषणा नगरी यस्तो संवेदनशील समाचार दिनु आचारसंहिता बाहिरको र जोखिममूलकअन्तर्गतकै कुरा थियो । काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक मण्डिखाटारमै बस्ने समाचारले फेरि रन्थनी छुटायो । केही गडबड नै भइसकेको हो कि क्या हो ? हल्ला त पहिले-पहिले कोइराला बिरामी हुँदा पनि चल्ने गरेकै थियो- कोइराला गइसके भन्ने किसिमको । तर यस्तो बिरामी तारन्तार भइरहेथे कोइराला । एक त जीर्ण उमेर, त्यसमाथि रोगको भार । फोक्सोको सङ्क्रमण, पिसाबको पनि । अक्सिजनको सिलिन्डरबिना एक घण्टा टिक्न गाह्रो पर्ने भन्ने हिसाबले ठट्टामा पनि कोइराला छाए ।
अधैर्य प्रतीक्षाले आम जनमानसलाई त घेरिरहेकै थियो, त्यो भन्दा दायित्व र धर्मले खबर दिनुपर्ने हतारमा मिडियालाई जकड्याएको थियो । अन्तत: २ बजेतिर खबर आयो – कोइरालाको निधन । १२ बजेर १० मिनेटमा । काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति तथा चिकित्सकहरूको बैठकले गर्‍यो निधनको आधिकारिक पुष्टि । न्युजरूममा कम्प्युटर खिटखिटाइरहेकै थिए, इन्जिनियरिङ विभागका दाइहरू पनि न्युज कन्ट्रोल रुम (एनसीआर) मा मेसिन दबाइरहेकै थिए ।
तर कता-कता सन्नाटा भने बाक्लिँदै गएको थियो ।
शनिबारको फुर्सद तोडेर निस्किए कोइराला महाप्रस्थानमा ।
तल भोलिपल्ट २१ मार्च आइतबारका दिन भएको कोइरालाको शवयात्राका झलकहरू हेरौँ :
शवयात्रा आउने समय कुरिरहेका सर्वसाधारण
शवयात्रामा लस्कर डिल्लीबजार उकालोमा
कोइरालाको पार्थिव शरीर लिएर अघि बढेको वाहन
पशुपति आर्यघाटतर्फ अघि बढ्दै शवयात्रा
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, March 22, 2010
Labels: आफ्नै कुरो, प्रसङ्गवश, मिडिया
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) March 22, 2010
..त्यो घटनाको विस्तृत विबरण (तस्विर सहित ) प्रस्तुत गरिदिनु भएको मा - धन्यवाद !
अनि मेरो पनि उहा लाइ हार्दिक श्रद्दान्जली छ !
गोकुल ढकाल March 23, 2010
उहा लाइ हार्दिक श्रद्दान्जली छ !
गजेन्द्र बुढाथोकी March 23, 2010
म सुजाता कोइराला निवास नजिकै बस्छु । बिहान घरभेटीकी आमा जसलाई गिरिजा बाबुले दिदी भन्नु हुन्थ्यो सुजाता निवास पुगेर आउनु भएछ । म बाथरुमबाट निस्केपछि गिरिजा बाबु त थलिनु भएछ । बाबु नजाने भन्नु भो । मेरो स्वास्थ्यका कारण म हिडिहाल्न सकिन । १० बजेतिर निस्केँ । कोइराला निवासमा भीड थियो । भित्र जाने सोच थिएन त्यसैले बाहिर बसिरहेको थिएँ । चित्रलेखा यादवले यी व्हीलचेयरवाला भाइलाई भित्र जान देउ भनेर प्रहरीलाइ भनेपछि म भित्र पसेँ । ११ बजेतिर । गिरिजाबाबुका चिकित्सकहरु ओहोर दोहोर गर्ने क्रम जारी थियो । कांग्रेस उपसभापति सुशील कोइराला रामचन्द्र पौडेलसहितका नेता धमाधम आए । डा अर्जुन कार्कीसँग सोधेँ किनकी गिरिजाबाबुको कोठा भएतिर व्हीलचेयर जाँदैन । उहाँले सं‍केतले पख भन्नुभयो । धुकधुकी फर्काउने प्रयास भइरहेको एक जना नेताले बताउनु भयो । शेरबहादुर देउवा त पछि आउनु भयो । त्यसपछि कांग्रेस बैठक बस्यो । आज औपचारिक रुपमा नभन्ने सहमति भयो । सवा १२ बजेति एभेन्यूजका भाइहरु नजिकैको घरको छतमा देखिए । मतिर हात हल्लाए मैले पनि जवाफ फर्काएँ । त्यतिखेरै उनीहरुले ब्रेकिङ न्यूज हालेको हुनुपर्छ । बल्ल १ बजेतिरमात्र कांग्रेस केन्द्रिय समितले मृत्युको खबर दिने निर्णय गर्यो । त्यतिखेरसम्म बाहिर कार्यकर्ताको भीड बढिसकेको थियो । अनि शनिबारलाई शब सुजाता निवासमै राख्ने र भोलिपल्ट मात्र रंगशालामा राख्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि शब राख्न आइस मगाइयो । तर ३ बजेमात्र आइस पुग्यो । सवा ३ बजेमात्र एक एक गरी कार्यकर्ताहरुलाई भित्र पठाउँदा पनि भित्र ठेमलठेल भयो । गिरिजाबाबुको शबलाई उहाँकै मोटर राख्ने गरिएको ग्यारेजमा राखियो । शब राख्न एउटा पुरानो खाट प्रयोग गरियो ।
Ashesh March 24, 2010
यो वर्णात्मक लेखसँगै नेपाली मिडियाको रवैया पनि लेखिदिनुभएछ । खुसी लाग्यो मलाई त । त्यो दिन म पनि रनभुल्लमै परेको थिएँ । एभिन्युज लगायत अन्य च्यानलहरूले कोईरालाको निधनको खवर टेलिभिजन स्क्रिनमा पिलिक् पिलिक् पारिरहेका वेला कान्तिपुरले भने स्वास्थ्य स्थिति स्थिर रहेको र कोईराला अचेत मात्र रहेको भनिरहेको थियो । नेपाली च्यानलहरू त न्यूज कभरेजमा धेरै चुस्त भईसकेछन् कान्तिपुर त ढिला भयो है भनेर गफ पनि गरियो घरैमा । तर आधिकारिक पुष्टिविना यस्ता समाचारहरू प्रशारण गर्नु राम्रो कुरो हुँदै होईन । मिडियाको आचारसम्हिता मिचेर प्रथम वन्ने होडवाजीमा लाग्नाले जनताहरू सत्य तथ्य समाचारवाट वञ्चित रहन्छन् ।
Basanta March 28, 2010
पढ्न ढिलो भएछु। तपाईँको यो रिपोर्टिङ्ग पनि राम्रो लाग्यो।
रुपेश March 29, 2010
धन्यवाद धैवजी । आलेख राम्रो लाग्यो । वास्तवमा सन्चारमाध्यमहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रेसको धर्मको अल्पज्ञानले पुरै सन्चारजगत बेला बेला अलमलमा परेको हामी बेला बेला देख्न पाउँछौँ । त्यस्तै त्यो एक दिन रह्यो, जसले केहि हदसम्म मैँ हुँ भन्ने सन्चारविदहरुसमेत समेत सोचमग्न बन्न पुगेका थिए, हाम्रा सन्चारमाध्यमहरुको रवैयाले ।